A na-ekwupụta nsonaazụ A' Design Award
A mara ọkwa ndị mmeri A' Design Awards
Ihe nturu ugo A' Design nke mba ụwa kwuputara atụmatụ kacha mma nke afọ na usoro nhazi niile.
A' Design Award (http://www.designaward.com), onyinye nturu ugo nke mba ụwa nke na-achị ọkwa nhazi ụwa, kwuputara nsonaazụ nke asọmpi imewe ọhụrụ ya.
A' Design Award ekwupụtala puku kwuru puku ọmarịcha atụmatụ, ngwaahịa emebere nke ọma, na ọrụ na-akpali akpali dị ka ndị mmeri. A na-ebipụta atụmatụ mmeri ihe nrite ọkwa ọhụrụ na ntanetị na ndepụta mmeri nke A' Design Award.
Otu nnukwu ndị juri nwere mmetụta na mba ụwa wee jiri nlezianya nyochaa ndenye A' Design Award nke kpọkọtara ndị gụrụ akwụkwọ ama ama, ndị nta akụkọ nwere mmetụta, ndị ọkachamara n'ichepụta ihe na ndị ọchụnta ego nwere ahụmahụ sitere n'akụkụ ụwa niile.
Ndị juri A' Design Award tinyere nnukwu nlebara anya na ngosi na nkọwapụta nke ọrụ ọ bụla. Mmasị maka nturu ugo imewe ahụ bụ n'ụwa niile, yana nhọpụta sitere na ngalaba ụlọ ọrụ niile bụ isi, yana ndenye sitere na mba dị ukwuu.
A na-eji obi ụtọ na-akpọ ndị na-anụ ọkụ n'obi maka imewe dị mma na ndị nta akụkọ n'ụwa niile ka ha nweta mmụọ imewe ọhụrụ wee chọpụta usoro nka, ime ụlọ, imewe na teknụzụ kachasị ọhụrụ site na ịga na ihe ngosi onye mmeri A' Design Award. Ndị nta akụkọ na ndị na-anụ ọkụ n'obi imewe ga-enwekwa mmasị na ajụjụ ọnụ ndị na-egosi ndị na-emepụta ihe nrite.
A na-ekwupụta nsonaazụ asọmpi A' Design kwa afọ n'etiti Eprel, buru ụzọ nye ndị meriri. Nkwuputa nsonaazụ ọha na-abịa ma emechaa n'etiti ọnwa Mee.
Ngwaahịa, ọrụ na ọrụ kacha mma n'ụwa niile na-egosipụta nka dị elu, teknụzụ na imepụta ihe bụ onyinye A' Design Award. A' Design Award na-egosipụta ịdị mma na imewe na ihe ọhụrụ.
Enwere ọkwa dị iche iche ise dị iche iche nke inye onyinye imewe:
Platinum: A na-enye aha nturu ugo Platinum A' ka ọ bụrụ ọmarịcha ọmarịcha klaasị ụwa nke na-egosipụta njiri mara mma nke ukwuu.
Ọlaedo: A na-enye aha onyinye nturu ugo ọla edo A' ka ọ bụrụ ọmarịcha klaasị ụwa nke na-egosipụta njiri mara mma nke ukwuu.
Ọlaọcha: A na-enye aha onyinye nturu ugo Silver A' n'ichepụta klaasị ụwa dị oke mma nke na-egosipụta ọmarịcha ọmarịcha na imewe.
Bronze: A na-enye aha onyinye nturu ugo Bronze A' ka ọ bụrụ ezigbo atụmatụ na-egosipụta ịdị mma na imewe.
Ígwè: A na-enye aha nrịbama nke Iron A' ka ọ bụrụ ọmarịcha atụmatụ na-egosipụta ịdị mma na imewe.
A na-akpọ ndị na-esepụta ihe, ndị na-ese ihe, ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ebe a na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ ihe owuwu, ụlọ ọrụ okike, ụdị, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ sitere na mba niile ka ha sonye na nkwanye ugwu site n'ịhọpụta ọrụ, ọrụ na ngwaahịa ha kacha mma maka ntụle onyinye.
A na-enye ihe nrite A' Design Awards n'ụdị asọmpi dị ukwuu, nke nwere ọtụtụ ngalaba.
Enwere ike ịchịkọta ngalaba A' Design Award na superset ise:
Award for Good Spatial Design: Atiya nturu ugo imewe na-amata atụmatụ dị mma n'ime ụlọ, ime ime, ime obodo na nhazi ala.
Award for Good Industrial Design: Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrite na-amata ezigbo atụmatụ n'ichepụta ngwaahịa, ime ụlọ, ime ọkụ, imewe ngwa, imewe ụgbọ ala, nkwakọ ngwaahịa na nhazi ígwè.
Award maka Ezi Nkwukọrịta Nkwukọrịta: Otu onyinye nzikọrịta ozi na-amata atụmatụ dị mma na imewe eserese, imekọrịta ihe, imewe egwuregwu, nka dijitalụ, ihe atụ, eserese vidiyo, mgbasa ozi na imepụta ahịa.
Ihe nrite maka imepụta ejiji dị mma: Otu nturu ugo nturu ugo ejiji na-amata atụmatụ dị mma n'ime ihe ịchọ mma, imewe ngwa ejiji, uwe, akpụkpọ ụkwụ na imewe uwe.
Ihe nrite maka Nhazi Sistemu Dị Mma: Otu onyinye nturu ugo nke sistemu na-amata atụmatụ dị mma n'ichepụta ọrụ, atụmatụ imewe, atụmatụ atụmatụ, imewe ụdị azụmaahịa, ịdịmma na ihe ọhụrụ.
A na-akpọ ndị nwetara ihe nrite tozuru oke ka ha bịa emume abalị mara mma na ihe nrite n'Italy, ebe a ga-akpọ ha ka ha nọrọ n'ọkwa iji mee emume ọganiru ha yana ịnakọtakwa trophies, asambodo ihe nrite na akwụkwọ afọ.
A na-egosipụtakwa atụmatụ ndị na-enweta ihe nrite n'ihe ngosi nka nke mba ụwa na Italy. A na-enye ndị tozuru oke nke A' Design Award ihe nrite A' Design chọsiri ike.
Ihe nrite nke A' Design gụnyere usoro mmekọrịta ọha na eze, mgbasa ozi na ọrụ inye ikike iji nyere aka mepụta ekele na mmata zuru ụwa ọnụ maka ọmarịcha ihe nturu ugo.
Ihe nrite A' Design gụnyere inye ikike nke A' Design Award Winner Logo ka ndị tozuru etozu nyere ha aka ịmata ngwaahịa, ọrụ na ọrụ ha dị mma site na ngwaahịa, ọrụ na ọrụ ndị ọzọ dị n'ahịa ahụ.
Ihe nrite nke A' Design gụnyere mmekọrịta ọha na eze mba ụwa na nke ọtụtụ asụsụ, mgbasa ozi na ọrụ nkwalite iji nyere aka na-emeri ihe nturu ugo iji nweta mkpughe zuru ụwa ọnụ, ahịa na ntinye mgbasa ozi.
A' Design Award bụ mmemme imewe kwa afọ. Ndenye na mbipụta na-esote nke A' Design Award and Competition emeghelarị. Ihe nrite A' Design na-anabata ndenye sitere na mba niile na ụlọ ọrụ niile. A na-anabata ndị nwere mmasị ịhọpụta atụmatụ dị mma maka ntụle onyinye na webụsaịtị A' Design Award.
Ndepụta ndị otu juri dị ugbu a, njirisi nleba anya imewe, ngwụcha asọmpi imewe, ụdị ntinye asọmpi imewe na ntụzịaka ntinye ntinye onyinye dị na webụsaịtị A' Design Award.
Banyere A' Design Awards
Ihe nrite A' Design nwere ebumnuche enyemaka iji kwalite ọha mmadụ n'ụdị dị mma. A' Design Award bu n'obi ime ka mmata maka omume imewe dị mma na ụkpụrụ zuru ụwa ọnụ, yana ịgbanye ma kwụọ ihe okike, echiche mbụ na ọgbọ echiche na ngalaba ụlọ ọrụ niile.
Ihe nrite nke A' Design bu n'obi ịkwalite oke sayensị, imewe na teknụzụ gaa n'ihu site n'iwulite mkpali siri ike maka ndị okike, ndị na-emepụta ihe ọhụrụ na ụdị n'ụwa niile iji wepụta ngwaahịa na ọrụ dị elu na-abara ọha mmadụ uru.
A' Design Award na-atụ anya ịkwalite ngwaahịa na ọrụ dị elu nke na-enye uru agbakwunyere, ịba ụba uru, ọrụ ọhụrụ, ọmarịcha mma, arụmọrụ pụrụ iche, nkwado dị mma na arụmọrụ dị elu.
The A' Design Award bu n'obi ịbụ ike na-anya ụgbọ ala kwupụta ịmepụta ọdịnihu ka mma na nhazi dị mma, ya mere Nrite A' Design Prize nwere ọtụtụ ọrụ iji kwalite atụmatụ dị mma enyere.
Hụ ndị mmeri nke A' Design Awards